/ ngwaahịa / Usoro nchịkwa nke ọgwụ
E nwere nsogbu ndị dị obere na obere nsogbu nke nsị. Ihe atụ nke nnukwu ihe egwu gụnyere ọnwụ, nkụchi obi na ọrịa akpa ume ebe obere ihe egwu nwere ike ịgụnye ọgbụgbọ na ọgbụgbọ na ịbata n'ụlọ ọgwụ. O yikarịrị ka ihe mgbagwoju anya na-eme bụ ịdaba n'ihe ize ndụ metụtara ihe dịgasị iche iche metụtara ahụike onye ọrịa, mgbagwoju anya nke ịwa ahụ a na-eme na ụdị anestetiiki eji. N'ime ihe ndị a, ahụike onye ahụ tupu ịwa ahụ (nke usoro ASA na-arụ ọrụ nke ọma) nwere nnukwu mmetụta na ihe gbasara ihe nwere ike ime. Ndị ọrịa na-etetakarị n'ime nkeji oge anestetiiki na-akwụsị ma nwetaghachi uche ha n'ime awa. Otu ihe dị iche bụ ọnọdụ akpọrọ nkwarụ na-arụ ọrụ ogologo oge, nke enwere mgbagwoju anya na-adịgide adịgide izu ma ọ bụ ọnwa, nke na-adịkarị na ndị na-awa ahụ na ndị agadi.
Ọgwụ anaesthesia ntụ ntụ na-emetụta ụbụrụ gị na akụkụ ahụ gị ndị ọzọ. Nwere ike ịnweta ọgwụ mgbatị ahụ site na akwara (intravenously, ma ọ bụ IV), ma ị nwere ike iku ume na ụfọdụ ọgwụgwọ. Na ọgwụ mgbochi ọrịa n'ozuzu, ị amaghị ihe na ị naghị enwe ihe mgbu n'oge ịwa ahụ.